နန်းဆိုင်နွမ်| January 8, 2013 | Hits:1,103
1 | | AAPP အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့မှ ကိုဌေးကြွယ်တို့ကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ ရုံးခန်းတွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – နန်းဆိုင်နွမ် / ဧရာဝတီ)
One Response	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website swe htwe January 8, 2013 - 9:31 pm	No political prisoner should be in jail. Goverment,hluttaw,civil societies and people are responsible for this.